Pie cheese Brie leh walnuts karamellized - Recipe | Recipe
Farmaajada Brie oo leh walnuts karamellized
Alicia tomero | 31/10/2021 22:13 | Bilow, Liisaska carruurta, Recipes, Recipes farmaajo
Soo ogow sida loo sameeyo keegan quruxda badan oo dhadhan khafiif ah leh farmaajo iyo wax macaan iyaga walnuts caramelized. Waxaad jeclaan doontaa dariiqa ugu fudud ee loo diyaariyo, iyada oo la diyaariyo macmacaan maraq ah oo hore loo diyaariyey iyo buuxin aan lahayn dhibaatooyin badan. Waa cunto kariye lala cuno qoyska oo dhan iyo in ay u adeegto sidii aperitif wakhti kasta.
Haddii aad jeceshahay empanadas waxaad isku dayi kartaa cunto karintayada 'pie ayeeyo'.
1 xaashi basbaas ah oo leh subag hore loo diyaariyey
200 g oo ah farmaajo
1 basal guduud
Buufin saliid saytuun ah
2 qaado oo sonkor bunni ah
2 qaado oo iniinta la jajabiyey
1 ukun si loo cadaydo oogada
Waan gooynay basasha oo qaybo yaryar ah. Waxaan ku kululeyneynaa digsiga digsi leh digsi saliid saytuun ah oo ku shiil dhowr daqiiqadood qanjaruufo milix ah. Dhinac ayaan iska dhignay.
Digsi yar oo shiilan waxaan ku darnaa laba qaado oo sonkor bunni ah. Marka ay bilaabato dhalaali iyo caramel yar, ku dar labada qaado oo ah walnuts. Waxaan u jeesaneynaa si caramel uu ugu dhex jiro lowska. Waxaan ku soo saareynaa xaashida dubista si loo qaboojiyo oo loo adkeeyo. Kadibna iniinta ayaanu googooynaynaa oo dhinac dhigeynaa.
Iska yaree macmacaanka laba qaybood oo siman. Waan gooyn doonaa qaybo ka mid ah cajiinka si aan u qurxinno macmacaanka marka aynu xidhno.
Waxaan ku shubnay mid ka mid ah xisbiyada farmaajo brie jejebiyey ama jeexjeex oo ku dul faafi cajiinka. Waxaan ku darnaa basasha iyo qaybo ka mid ah walnut caramelized.
Qeybta kale ee cajiinka waxaan xireynaa wax kasta oo sameysa patty. In yar oo biyo ah waxaan xirxireynaa geesaha waxaanan ku tuujin karnaa farahayada iyaga oo siinaya qaab qurxin yar. Waxaan dhigeynaa xariijimaha cajiinka dushiisa adigoo rogrogays leh qaabab maroojin, waxaanu ku dhejin doonaa biyo yar. Waxaan garaacnay ukunta oo caday dhammaan dusha oo dhan si uu u bunni noqdo markaannu dubno. Waxaan ku ridnay foornada si 180 ° 15 daqiiqo.
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Liisaska carruurta » Farmaajada Brie oo leh walnuts karamellized